TORITENY Ho an'ny wifi Atheros 9285 | Avy amin'ny Linux
Tsara aorian'ny fametrahana Debian Ao amin'ny solosainako, manaraka ny fikirakirana izy io, saingy anjaran'ny wifi kosa, izay na dia avy amin'ny orinasa aza dia tsy mandeha tsara amin'ny Windows 7, ary izany dia tsy misy afa-tsy amin'ny fonosana meta-pack izay miasa ao Ubuntu.
Nanomboka tamin'ny wiki aho debian amin'ny anglisy raha tsy mandeha izy. Notohizako tamin'ity izay manao dingana fanampiny, nefa tsy misy. Este ary mbola tsy mandeha io. Saika kivy aho rehefa, fa rehefa avy nitady Internet aho dia nahita ilay maody nilaiko.
Noho izany dia nanomboka nikaroka tamin'ny Google ny fomba fametrahana ilay modely amin'ny Linux aho. Andao hatao:
Hamafana ny maodelin'ny ath9k aloha izahay
# modprobe -r ath9k
Izahay dia misintona ny mpamily amin'ny adiresy voalaza etsy ambony, ka mifidy azy io arakaraka ny voam-balonay
Izahay dia mamorona ny folder firmware (raha tsy misy izany) ary mamindra ny mpamily any izahay (carl9170-1.fw)
# mkdir / usr / local / lib / firmware
Farany dia manao Modprobe amin'ilay modely vaovao izahay
# modprobe carl9170
Averina indray ary vonona
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » TORITENY Ho an'ny wifi Atheros 9285
Noho ny fahalianana te hahafanta-javatra ... modely amin'ny laptop manao ahoana izy io?
Izy io dia HP pavilion g4-1174la Notebiik PC.
Miaraka am-baravarankely na dia tsy mandeha aza ny webcam, avy amin'ny orinasa, dia tsy maintsy nalefako tany amin'ny laboratoara HP, fa satria be ny asako dia tsy nandefa azy aho.
Mandeha tsy miteny intsony izao, manana be dia be aho nefa tsy mampiasa windows ary avy eo tsy mila izany.
Notebook tiako hapetraka, lesoka amin'ny rantsantanana ary tsy fahampian'ny fanovana, heh
Torohevitra vitsivitsy, Alf, mila mijery bebe kokoa ny tsipelina ianao (herror, mandeha io).
Ireo visy ireo, herror, hahahahahaha
[Inkscape] Fampidirana ny Inkscape